Ukuphela kweSatifikethi sokuSebenza ngokutya
Ukuba uye wahamba noFundo lokuHlola lokuFunda 2 Ukuphela kokutya ngokutya , ngeendlela zonke ufunde iimpendulo apha ngezantsi. Ezi zimpendulo zokufunda izimpendulo zempendulo zihambelana neqendu, ngoko ke abayi kuqonda ngokwabo.
Iimpapasho zePhasiwedi eziPapashoweyo: Ukuphela kokuHlola okuHlalisayo UkuHlola iphepha lokusebenzela | Ukuphela kokufunda ngokubanzi Ukufunda Ukuqonda Iphepha lokusebenzela Phendula okubalulekileyo
1. Inokuchazwa kwenkcazo yomlobi yowesifazane odla kumhlathi amane
(D) Umbhali uncibilikiswe ngumsebenzi wesifazane.
Ngoba? A ayilunganga kuba asikwazi ukuba yintoni na intokazi ethanda ukuyidla. Akukho nto kwisicatshulwa esibonisa ukuba uyithandayo. B ayilunganga kuba sinokuthi into yokuba le ntokazi ayinakuqonda oko kudlayo, ngoko ke akanako ukukwazi ukuyonwabela ngokwenene. C ayilunganga kuba ukusebenza kwayo kuphazamisa amava akhe ekudleni kunokunyusa. Umbhali akaze avelise nantoni na ngokutya ngokufanelekileyo kwimigca, mhlawumbi, ngoko-ke i-E iphinde iphume. Siyakwazi ukunyaniseka ukuba uyasetyenziswa ngenxa yokugwetywa kwakhe: "Ukuba wayesazi ukuba umntu wayembukele, ndiqinisekile ukuba uya kudla ngokungafaniyo." Oku kuthetha ukuba wayeza kuba neentloni zokutya njengoko wayenayo, ngaloo ndlela abonisa ukuba umlobi uyaphazamisa indlela yakhe yokutya.
2. Ngokwindinyana, isizathu esona sizathu sokuthi abantu badla ngokutya
(B) kuba asiyikuhlaziya ukutya kwethu kakhulu
Ngoba? A, B kunye neC zikhankanywe kwinqanaba, kodwa kungekhona njengempembelelo yokutya ngokutya. Eyona mpendulo yokukhathazeka - ukutya ngokukhawuleza kubotshwe ekungangeni ukuhlafuna, kodwa ivesi ayifuni okanye isitsho ukuba sisetyenziselwa ukutya ngokukhawuleza, ngoko ke sidla ngokutya. Le ndinyana inikeza iinkcukacha ezithile malunga nokucocwa kwenkqubo eyenza ukutya kwethu kube lula ukugwinya, kusinika ukuba sidle okungaphezu koko sifanele, ngoko-ke impendulo B iyona nto ikhethekileyo.
3. Ezi zinto zilandelayo zonke izithako kwiiqanda zeqanda, NGAPHAMBILI
(E) inyama yenkukhu emnyama
Ngoba? Imhlophe yenkukhu inyama (umgca 32). Lo ngumnye wabo "ukuzingela nokukhangela" iintlobo zeengxelo zeenkcukacha. Zingaba zikhohlisi kuba ziphantse ukuba zenze ukuqonda ukufunda, kodwa gxininisa indlela onokuzifumana ngenyameko iinkcukacha ezihambelana nesiqendu.
4. Yiyiphi enye yeengxelo ezilandelayo ezicacileyo kakuhle imbono ephambili yevesi?
(B) Ngenxa yokuba ukutya okucokisekileyo kungenakunqandwa kwaye kulula ukuyidla, kubonisa indlela engafanelekanga ngayo, ukushiya abantu bengazi kakuhle ukhetho lokutya oluthathaka.
Ngoba? A inkulu kakhulu, kuba ihluleka ukukhankanya ukutya okucutshiwe, nto leyo eyona nto ikhiye kwinqaku. C inqabile kakhulu kuba ibhekisela kuphela kwiClili, kwaye isicatshulwa sidlula ngapha enye ivenkile. D yenza i-supposition-yokuba abantu baya kuba nempilo ngenxa yeli nqaku. Oku kungakhange kuthethwe okanye kungabonakali ngqo, ngoko ayikwazi ukuba yinxalenye yengcamango ephambili. E inqabile kakhulu, ngoko ke iB isona sikhetele.
5. Kwisivakalisi sokuqala sesiqendu sesine, igama elithi "amandla" liphantse lithetha
Ngoba? Nanku apho ulwazi lwakho lwesigama okanye ubuchule bakho bokuqonda amagama omlomo kwisimo sinobuchule. Ukuba wawungayazi intsingiselo yegama, unokucinga izinto ezisekelwe kwisicatshulwa: "... lona wesifazane wahlasela ukutya kwakhe ngokukhawuleza." Ekubeni ukudibanisa "kwaye" ujoyina amagama amabini / amabinzana aneentsingiselo ezifanayo, uC uphelelwa lithemba lithetha ubuvila.
Igama elithi "hlaselwa" alihambelani kakuhle ngokuzonwabisa, ngoko i-A iphume. Ekubeni loo ntokazi ayengazi ukuba ngubani owayemjongayo, u-Flamboyance, B, uphume, naye. Okushiya i-D kunye no-E. Ukukhwabanisa kubonisa ukungcola kohlobo oluthile kwaye nangona loo nto ibhinqa yayingabonakaliyo, wayengayeki ukutya kwakhe, ngoko ke iD iyona mpendulo efanelekileyo. Iyahambelana kakuhle nesivakalisi.
Abasebenzi beMossaurs - Izidumbu eziLwandle eziLona ziLwandle